१६ वर्षपछि विश्वकपमा सेनेगलको सनसनीपूर्ण जित – www.janabato.com
Latest Taja-update TOP STORIES खेलकुद
१६ वर्षपछि विश्वकपमा सेनेगलको सनसनीपूर्ण जित
६ असार २०७५, बुधबार ०२:१४ June 20, 2018 जनबाटो मिडिया प्रा.लि.
विश्वकप फुटबल अन्तर्गत समूह चरणको खेलमा अफ्रिकी टोली सेनेगलले युराेपेली टाेली पोल्यान्डलाई पराजित गरेको छ।
सनसनीपूर्ण खेलमा सेनेगलले पोल्यान्डलाई २—१ ले पराजित गरेको हो। सेनेगलले १६ वर्षपछि विश्वकपकाे पहिलाे खेलमा जित हात पारेकाे हाे। सन् २००२ विश्वकपकाे पहिलाे खेलमा सेनेगलले तत्कालीन डिफेन्डिंग च्याम्पियन फ्रान्सलाइ हराउँदै सनसनी मच्चाएकाे थियाे।
मंगलबार राति भएको खेलमा ३७ औं मिनेटमा पोल्यान्डका खेलाडीले आत्मघाती गोल गरेपछि सेनेगलले अग्रता लिएको थियो। पोल्यान्डका खेलाडी थियागो सियाकोनेकले ३७ औं मिनेटमा आफ्नै गोल पोष्टमा बल छिराएका हुन्। मध्यभागतिरबाट आएको बल सेनेगलका इदिरसा गेयियले पाेल्यान्डकाे पाेष्टतर्फ लक्षित गरी आफ्ना साथीतर्फ अघि बढाएका थिए। कडा प्रहारमा आएको सो बललाइ नरोकी साथीतर्फ बढाउन खोज्दा उनको खुट्टाबाट गएको बल गोल पोष्टमा छिरेको थियो।
आत्माघाती गोलका कारण पहिलो हाफसम्म सेनेगल १—० ले अग्रताको अवस्थामा रह्यो। ६० औं मिनेटमा सेनेगलका नियांगले गोल गर्दै खेललाइ २-० को अवस्थामा पुर्याए।
८५ औं मिनेटमा ग्रेजोराज क्र्याचुविकले पोल्यान्डका लागि सान्त्वना गोल फर्काए पनि युराेपेली टाेली खेलमा फर्किन सकेन।
यसअघि १६ औं मिनेटमा सेनेगलका नेइमार अर्थात् २० वर्षे इस्माइला सारले पेनाल्टी अपिल गरेका थिए। पोल्यान्डको गोलपोस्ट नजिक पोलिस मिडफिल्डरले ढकेलेपछि उनले त्यसविरुद्ध पेनाल्टी अपिल गरेका थिए। तर बहराइनका रेफ्रीले दिएनन्।
९० मिनेटको प्रतिस्पर्धामा पोल्यान्ड हाबी भए पनि जितका लागि चाहिने गोल गर्न भने चुक्यो। गोल पोसेसनमा पोल्यान्ड ६१ को स्थितिमा रह्यो भने सेनेगल ३९ मा रह्यो। समूह एचमा जापान र सेनेगल ३-३ अंकसहित अगाडि देखिएका छन्।
← इजिप्टलाई ३–१ गोल अन्तरले पराजित गर्दै रसिया बिजयी
भैरहवा विमानस्थलमा लफडा, डिजीविरुद्ध आन्दोलन →
२९ कार्तिक २०७५, बिहीबार १३:२१ जनबाटो मिडिया प्रा.लि. Comments Off on पत्रकार आचार सहिता सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न,नेपालमा ३ थरी पत्रकार रहेको राष्टिय सभा सदस्य उज्जवको जिकिर
अर्घाखाँचीमा गुञ्जियो क्षितिज परिवार, सांस्कृतिक कार्यक्रममा जनताको अपार सहभागिता
५ मंसिर २०७५, बुधबार ०६:३६ जनबाटो मिडिया प्रा.लि. Comments Off on अर्घाखाँचीमा गुञ्जियो क्षितिज परिवार, सांस्कृतिक कार्यक्रममा जनताको अपार सहभागिता
माओवादी नेतृ देवी खड्का वेहोस, नर्भिकमा भर्ना
१३ फाल्गुन २०७४, आईतवार १३:३१ जनबाटो मिडिया प्रा.लि. Comments Off on माओवादी नेतृ देवी खड्का वेहोस, नर्भिकमा भर्ना